Iindaba -I-3LTEX ithathe inxaxheba kwi-Plus kunye nesona siganeko sikhulu kwicandelo lezoKhuseleko, uKhuseleko kunye neMpilo eMsebenzini
I-3LTEX ithathe inxaxheba kwi-Plus kunye nesona siganeko sikhulu kwicandelo lokhuseleko, uKhuseleko kunye neMpilo eMsebenzini
Qho ngonyaka, inkampani ye-3ltex izakuthatha inxaxheba kweyona miboniso mikhulu yase China nakwamanye amazwe enxulumene neeteknoloji, ukhuseleko kunye nempilo.
Umboniso wezoRhwebo lwaMazwe ngaMazwe neCongress sesona siganeko sikhulu kwicandelo lezoKhuseleko, noKhuseleko kunye neMpilo eMsebenzini, izixhobo ezikhuselayo kunye neqonga elikhokelayo kwihlabathi lokwabelana ngamava eengcali eziphambili kwicandelo lokhuselo lwabasebenzi.
Idokodo le-3Ltex (umyili kunye nomvelisi we-techtextiles) libonise imeko zase China kushishino lwempahla eyolukiweyo.
Funda ngakumbi malunga nomsonto okrelekrele wenkampani ye-3ltex, amalaphu kunye nolunye uluvo apha.
I-3LTEX ilungiswe ngononophelo, kunye namandla okuphucula imveliso kunye nemigangatho yobugcisa ebalaseleyo, intsebenzo yethu ephezulu yentsimbi kunye namalaphu smart abuye abalasela kolu shishino.
Uyilo olunobuchule kunye nokudityaniswa kwemisebenzi emininzi yokuthintela umlilo, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukuhambisa ubushushu, ukuqhuba kombane, i-antibacterial kunye ne-antistatic kuye kwatsala abathengi abaninzi ukuba bayeke, babukele kwaye bathethathethane.
Abathengi abaninzi bazise iingxaki zobuchwephesha ezihlangabezane nazo ngexesha lokuqhubekeka. Emva kwesikhokelo sobuchwephesha kunye nenkqubo yokwenza iinkqubo ze-3LTEX ezikumgangatho ophezulu, abathengi abaninzi banelisekile kwaye injongo yokuthenga ifikelelwe kuloo ndawo.
Esi sisidlo seshishini, kodwa kukwayihambo lokuvuna. Kulo mboniso, sibuyise iiodolo ezininzi kunye nezimvo ezixabisekileyo ezivela kubasebenzisi bokugqibela kunye nabahlobo abathengisi.
Kwiminyaka yakutshanje, i-3LTEX ifezekise uphuhliso oluthe tyaba kunye noluthe nkqo kumzi-mveliso ohlakaniphile kunye nakwimizi-mveliso yelaphu, eneempumelelo ezibalaseleyo, ingqokelela ethile yohlobo kunye nophuhliso oluzinzileyo.
Ngobuchule bokusebenza kakuhle kwimarike, sele sithathe indawo ebalulekileyo kwicandelo lemisonto kunye neendwangu ezikrelekrele.
Nangona kunjalo, siyazi ukuba "kusekude ukuba uhambe."
Siza kuqhubeka nokuphucula inkqubo yolawulo, ukukhawulezisa inkqubo yokwakha uphawu lwe-3L, ukujongana neemfuno zemarike ngokusesikweni, kunye nokwenza iimveliso ezisemgangathweni ukunceda uninzi lwabasebenzisi kunye nabahlobo.